Global Voices teny Malagasy » Maneho fitomboan’ny fandrahonana mpanao gazety ao Okraina ny fanafihana nataon’ny mpiambina ny kaominina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 03 Aogositra 2018 5:13 GMT 1	 · Mpanoratra Kanykei Tursunbaeva Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Okraina, Fahalalahàna miteny, Fitantanam-pitondrana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Mpikambana iray ao amin'ny Mpiambina Monisipaly nanafika mpanao gazety tamin'ny etona mandatsa-dranomaso. Saripikan'i Tomikage tao amin'ny Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
Mbola ho sarotra ho an'ny mpanao gazety ao Okraina hatramin'izao ny taona 2018 .
Ny 4 Jona 2018, namoaka fanambarana ampahibemaso  ny solontenan'ny OSCE momba ny fahalalahan'ny Media, Harlem Désir, manameloka ny mpitondratenin'ny mpampanoa lalàna ao Okraina, izay namoaka ny lisitr'ireo “mpamadika” manohitra ny fanjakana, izay ahitana mpanao gazety tsy miankina roa. Niantso ny hetsika ho “tsy azo ekena sy mampidi-doza” i Désir ary nandrisika ny manampahefana mba hiditra an-tsehatra ho fiantohana fa miaro ny fahalalahan'ny media ny manampahefam-panjakana rehetra .
Mampiseho ny tranga vao haingana nahitàna mpanao gazety notafihan'ny mpiasa mpiambina ny lapan'ny tanàna fa mety hiparitaka ny olana eo amin'ny manampahefan'ny governemanta sy ny mpandraharaha mikasa ny hanampim-bava ny asan'ny haino aman-jery. Tao an-tanànan'i Odessa, nisy fifandirana teo amin'ny orinasan'ny fisoloam-bava ara-pitsarana eo an-toerana sy ny mpikambana maromaro tao amin'ny Mpiambina Monisipaly, ekipa mpitandro filaminana izay miasa manokana tsy miankina amin'ireo sampan-draharahan'ny lalàna, eo ambany fibaikoan'ny fitantanana ny tanànan'i Odessa.
Mpanao gazety telo no tonga teo amin'ny toerana misy ny fifanolanana tamin'ny 13 Jolay, izay nahitana mpiambina monisipaly 40 tonga nanaisotra toeram-piantsonana vita amin'ny vy, araka ny baikon'ny tanàna. Nisy ny fifandonana teo amin'ireo mpiambina ny tanàna sy ireo mpiasan'ny fisoloambava ara-pitsarana, izay nanambara fa ny orinasan'izy ireo no tompon'ny toeram-piantsonana.
Nanafika ampahibemaso ireo mpanao gazety tamin'ny etona mandatsa-dranomaso sy kibay fingotra ireo mpiasa mpiambina tanàna. Ity lahatsary eto ambany ity dia mampiseho ny zava-nitranga taorian'izay. Niharan'ny herisetran'ny mpiambina tanàna ny lehiben'ny tonian-dahatsoratry ny gazety Unsolved Crimes raha teo am-pakàna horonantsary. Voadarok'ireo mpiambina ny tanàna imbetsaka kosa i Vitaly Tkachenko, avy ao amin'ny gazety Obshestvennyi Priboi.
Nitabataba tamin'ny fakàntsary ny mpiasa mpiambina monisipaly iray, Grazevich Alexander:
Miala teto, nahoana ianao no maka sary ahy?! Hovakiako ny fakantsarnao sy ny tavanao koa!
Denis Razdorozhny, mpanara-maso ny departemantan'ny fiarovana ny Mpiambina Tanàna, nilaza tamin'ireo mpanao gazety hoe:
Nasaina nanao ny zava-drehetra tamin'ny rà na tamin'ny fomba mahazatra ireo ankizilahy ireo!
Noterena niditra tanaty fiara ilay mpanao gazety Miroslav Bekchiv, ao amin'ny gazety Obshestvennyi Priboi, ary nentina tany amin'ny paositry ny polisy. Raha tao anaty fiara, nodarohana sy norahonan'i Yuri Savchenko, filoha lefitry ny mpiambina ny tanàna ao amin'ny filan-kevitry ny tanànan'i Odessa sy Evgenyi Miroshnichenko, filoha lefitry ny mpiambina ny tanàna i Yuri Savchenkary.
Ao amin'ny lahatsary, heno milaza i Yuri Savchenko hoe:
Ampidiro anaty fiara ry k**d**-d****ny.
Evgenyi Miroshnichenko avy eo nilaza hoe:
Henoy, ry t*y! Tsy hitondra anao any amin'ny paositry ny polisy aho, fa hamoaka zavatra amin'ny fomba hafa! Hoentiko any amin'ny toerana hafa izay tsy misy olona miverina ianao!
Nentina tany amin'ny hôpitaly i Bekchiv tatỳ aoriana, ary nilaza ny dokotera fa niharan'ny ratra mafy amin'ny atidoha, mariky ny fahasemporana sy fahamaizana teo amin'ny maso izy.
Ny 18 Jolay 2016, nametraka vonjimaika mpiambina tanàna roa, Oleinik Pavel sy Gratsevich Alexander amin'ny trano ambenana ny Fitsarana Primorsky, ao Odessa. Samy nampandrenesin'ny mpampanoa lalàna mialoha izy roa ireo fa mety ho voampanga eo ambanin'ny lalàna momba ny “hetsika tsy ara-dalàna ataon'ireo manampahefana tamin'ny fikomiana taloha” sy “fandrahonana famonoana, herisetra na fandringanana na fanimbana ny fananan'ny mpanao gazety” izay samy ao anatin'ny fehezan-dalàna famaizana ao Okraina izy ireo.
Na dia nanelingelina ny mponin'i Odessa aza, dia tsy nahagaga ilay zava-nitranga – tsy vao voalohany izao no nandray fepetra toy izao ny mpiambina ny tanàna.
Na dia nahazo alalana hanao hetsika fiambenana fiarovana aza ny mpiambina ny tanàna ary vatsian'ireo mpandoa hetra ao Odessa ara-bola, dia tsy misy ifandraisany amin'ny sampan-draharahan'ny fampiharana lalàna ao Okraina izy. Araka ny lalàna, tsy manana zo hafa afa-tsy ny miantoka ny fiarovana izy. Tsy manan-jo hanimba fananana izy. Saingy tamin'ity tranga ity, nasain'ny manampahefan'ny tanàna hanao izany iny mpiambina ny tanàna.
Nanasongadina indray ny faharatsian'ny fiarovana ny mpanao gazety ao Okraina ny zava-misy. Araka ny antontan-kevitra avy amin'ny Sendikà Nasionalin'ny Mpanao Gazety any Okraina, tsy nisy na dia fitoriana iray aza tamin'ireo fanafihana 90 natao tamin'ireo mpanao gazety tamin'ny taona 2017. Satria miandry ny tohin'ny raharaha Miroslav Bekchiv, izay mbola ao anatin'ny tsy fahasalamana tanteraka ny fiarahamonina, mitsangana ny fanontaniana mikasika ny fomba hiarovana ireo mpiasan'ny haino aman-jery manoloana ny fitomboan'ny fandrahonana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/08/03/123759/
 fanambarana ampahibemaso: https://www.osce.org/representative-on-freedom-of-media/383478
 tsy nisy na dia fitoriana iray aza : https://www.unian.info/politics/2389147-none-of-90-attacks-on-journalists-in-ukraine-solved-in-2017-union-head.html